EyoMsintsi 10, 2018 admin
Singapore crypto exchange KuCoin uyasandisa ne $ 3M utyalo-Bitcoin Australia
exchange cryptocurrency Singapore-based KuCoin liye wokututa yayo Australia nge $3 million utyalo lwasekhaya exchange Bitcoin olulawulwayo, okwenza umqhubi exchange Asian ngenisa emarikeni Aussie kugxininiswe esiphawulweyo kuniko ekupheleni phezulu-, zimali advanced.
Bitcoin esiphezulu Rupert Hackett Australia i-ubanga ukwanda yenkampani ngokwakhe nochuku iyakuya 30 amazwe phambi kokuphela 2020. "Ndifuna ukuqinisekisa ukuba oku kuyinyaniso,"KuCoin elilawulayo eliyintloko Michael Gan wathi utyalo yenkampani. "Oku kuphela sigqibo enkulu qhinga kodwa iya kuba kakhulu ixesha elide ubambiswano ukuba ukunceda cryptocurrency ukukhula jikelele."
Citigroup na ibhanki zamva ukunikela isisombululo lokukhulisa crypto
Citigroup ukudalile oko ubiza ntoni Receipt Digital Asset okanye Dar, Kucingelwa ukuba le yeyona ndlela ngqo ukutyala cryptocurrencies ngaphandle ukufuya nabo, ngokwendlela abantu ngolwazi yeprojekthi. I Dar isebenza kakhulu ngathi Receipt elinguVimba American, leyo enika US abatyali ukukwazi ukutyala ezitokisini zasemzini na wasebenza kwi US zingxoxo.
Isakhiwo ungabeka cryptocurrencies phakathi kolawulo zemimiselo ezikhoyo kwaye unike ezinkulu abatyali-Wall Street indlela ngaphantsi yingozi ngayo utyalo eklasini asethi.
SEC Kumiswe ukhuseleko Exchange-wasebenza Bitcoin
Isixhobo utyalo-mali kakhulu ubufanasini ukuba wayefuna ukuba ndibhenele US iimarike zikawonke abatyali abafuna ithuba cryptocurrency iye nje wambona ezingumqobo. I-US Securities and Exchange Commission ukhuphe umyalelo efuna ukuxhoma yorhwebo Bitcoin Tracker One kunye namanqaku zotshintshiselwano-wasebenza Tracker One kaEtere, ekhutshwe yi XBT Provider AB, oluncedisayo Swedish-based le U.K. siqinile CoinShares Holdings.
Xa lo myalelo, i Sec ucaphule “ukubhideka nxaxheba market” esekelwe kwi-US ukuba uhlobo lwezixhobo zemali njengoko isizathu lokusuka. Ukumiswa isebenza njengento namhlanje, yaye iza kuqhuba ngo Septemba 20.
Ingxelo Daily Market Kraken for 09.09.2018
NOT / JONGA - Best Blockchain in...
EyeNkanga 19, 2018 e 7:39 AM
EyeNkanga 26, 2018 e 1:34 AM